🥇 ▷ Maxay Samsung had iyo jeer nuqulo Apple? ✅
Maxay Samsung had iyo jeer nuqulo Apple?
Maxay Samsung had iyo jeer nuqulo Apple? – La yaab maahan, astaamo badan oo hore iyo waxyaabo naqshadeeya naqshadaha Samsung ayaa si uun laga soo guuriyey iPhone Samsung Apple Apple.
Xaqiiqdii, anigu ma ihi taageere ugu weyn ee iPhones-kii ugu dambeeyay… Waxaan u maleynayaa inay qaali yihiin, hadana, waa isla alaabada ugu hooseysa sanad kasta, in kasta oo ay leeyihiin SoC arxan daran iyo nidaam hawlkar ah oo karti badan oo karti leh. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa run in ay tahay Apple oo abuuray dunidan cajiibka ah, halkaas oo aan ku qaadi karno taleefanno gacmeed fudud, si aan u sameysanno waxyaabo badan oo kombuyuutarrada loo baahnaa waqtiyadii hore.
Ka dib oo dhan, bilowga tartanka Samsung vs Apple tartankii ugu horreeyay ee Galaxy waa kuwa xun… Android waqtigaas midkoodna ma caawin! Si kastaba ha noqotee, nashqadeynta iyo tayada khibradda isticmaaleha waxay uga tagtaa wax badan oo la doonayo.
Samsung vs Apple “Markaa wax ka fiican ma jiraan wax ka koobiyeynta wax aad u badan oo tartankaagu uu aad u badan sameynayo!”
Dhacdo ahaan, dhowr sano ka hor, dukumiinti gudaha ah ayaa ku dhacay internetka, kaas oo asal ahaan muujiyey in Samsung uu si xoogan u waxyooday iPhone. Apple. Waxaad ka aqrisan kartaa dukumintiga halkan.
Waxaas oo dhami, Samsung ayaa ugu dambeyntii helay dariiqo u gaar ah, wax aan caadi aheyn wax yar kadib markii la bilaabay. Xusuusin! Tan markaan fiirineyno buugga xusuus-qor ee deriska
Waa wax aan la dafiri karin in Ogeysiiska ugu horreeya uu yahay aalad ugu dambeyntii abuureysa noocyo badan oo alaabooyin ah, The Wajiga. Marka la soo koobo, hadaadan jeclayn dhamaan taleefanada suuqa waxay leeyihiin shaashado waa weyn… Kaliya Samsung iyo adiga Galaxy Note Si aad u eedeyso!
Marka, taas oo ku saleysan tan, Samsung waxay go’aansatay inay sameyso badeecad u gaar ah, iyagoo ka tagaya iPhone … Natiijooyinka runtii waa wax aan caadi aheyn!
Sidaynu nidhi Biyo baxtaasi Galaxy S10 Fursadaha ayaa ah in qalabku haysto haddii aad jeceshahay adduunka Android. Waad ku mahadsan tahay waxkasta oo la cusbooneysiiyay oo ah “interface” Mid UI “, tayada dhismaha Samsung, iyo dabcan naqshada Samsung. Tusaale kale oo kan ah waa safka cusub. casriga Galaxy Note 10, kaas oo qaadanaya S10 oo kor ugu qaadaya heer kale. (Uma maleynayo inay tahay wax lagu qoslo oo go’aannada qaarkood lagu gaaro noocyo ka jajaban, inkasta oo ay yihiin)
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in caadooyinka duugga ah aysan u ekaan doonin …
Samsung had iyo jeer nuqulo badan oo Apple ah. Had iyo jeerna, wuxuu ugu dambeyntii sameeyaa sumcad xumo. (Samsung waxay tirtirtaa fiidiyowga xiisaha leh iyadoo la tirtiro ‘Jack Audio’)
Ka dib oo dhan, 2015 markii la bilaabay Galaxy S6, soosaaruhu wuxuu ka tagay caaga si uu ugu khayaamo naqshadaha aad ugu eg iPhone waqtigaas. Waxaa la soo saaray taleefan casri ah oo ku saleysan aluminiumka iyo muraayadda hore iyo gadaal. Laakiin markii la bilaabay “iPhone X” ee 2017, La Apple waxaan go aansaday in aan uga tago aluminiumka si aan ugu daaro birta aan la jabin. Ma qiyaasi kartaa yaa sidoo kale bilaabay isticmaalka aluminium dhamaadka ugu sareeya? (Fiiri fiidiyowga hoosta, kaasoo ka bilaabanaya 14 s)
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=CYA_XAMfRfo (/ embed)
Sidoo kale, hadaadan xasuusanin, horaantii sanadkaan Samsung waxay qaadatay bog Apple waxaana wajiga furitaanka ee Galaxy S uu ka kooban yahay 3 teleefoon gacmeed oo ku soo bandhigaya Galaxy S10e, kaasoo hoosta kaga jira iPhone Giant Xr oo ka socda Kuuriyada Koofureed.
Maaha in la xuso ka bixitaanka ‘Audio Jack’ oo Samsung ay ku raaxaysatay xooggiisa oo dhan! Khayaamo adag oo ku saabsan suuqgeynta fiidiyowga … in wax walba la tirtiray, kama raad raaco internetka.
Ka sokow intaas, maxay kula tahay waxaas oo dhan? Fikraddaada ku soo gudbi faallooyinka hoose.